Vaovao - Ahoana ny fomba hampivelarana ny indostrian'ny famolavolana Huangyan avo lenta
Ny tolakandron'ny 27 Aogositra, "Miangavy anao re hifampiraharaha" - "Ahoana ny fomba fampiroboroboana ny indostrian'ny famolavolana Huangyan avo lenta" sy ny hetsika fandraisam-bahiny an'ny Komity Toekarena tsy miankina ". Izy Yitao dia nisolo tena ny Huangyan YJIE plastics Co., ltd handray anjara.
Mifantoka amin'ny lohahevitra fifampiraharahana momba ny "Ahoana ny fampivelarana ny indostrian'ny famolavolana kalitao avo any Huangyan", ny olona mifandraika amin'ny Biraon'ny Fampandrosoana sy ny Fanavaozana ny Distrika, ny Biraon'ny Komitin'ny Antokon'ny Antokom-paritra ary ny talen'ny Biraon'ny Fihaonamben'ny Fifampidinihana Politika ao amin'ny Distrika, mpikambana ao amin'ny “Efitra fandraisam-bahiny komity ara-toekarena tsy miankina Huangyan”, solontenan'ny orinasa, mpikambana ao amin'ny ekipa mpikaroka ary ny hafa dia nifampidinika mivantana momba ny “fomba hampiroboroboana bebe kokoa ireo orinasa mamolavola an'i Huangyan hanamafisana ny fanavaozana ara-teknolojia sy ny fanavaozana ny fitantanana”, “ny fomba hanomezana kilalao feno amin'ny fifantohana indostrialy ary hahazo fampandrosoana avo lenta ", ary" ny fomba fanaovana ny indostrian'ny famolavolana an'i Huangyan amin'ny toe-draharaha iraisam-pirenena sy ny makro Eo ambanin'ny toe-karena henjana, ny olana toy ny fiakarana amin'ny fironana sy ny firoboroboan'ny hery velona no resahina sy ifanakalozana. Ho an'ny fanontaniana sasany, ny departemanta miasa mifandraika amin'izany dia voavaly eo an-toerana.
Nasongadin'ny fihaonana fa satria misavoritaka ny indostrian'ny famolavolana Huangyan amin'izao fotoana izao dia maika ny hamaha ny firafitry ny habaka, ny firafitry ny vokatra, ny firafitry ny orinasa ary ny olana hafa amin'ny alàlan'ny fanovana sy fanavaozana. Antenaina fa hiverina hiatrika ny olana ny sampana rehetra, handinika tsara sy hampihatra izany ary hanolotra vahaolana hafa.
Fonosana ho an'ny tavoahangy divay, Tavoahangy misy alika ho an'ny biby, Barware tsy vaky, Barware plastika, Barware Set, Barware fampiroboroboana,